Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Sri Lanka » Nandeha hidin-trano vaovao i Sri Lanka satria nihombo ny fahafatesan'ny COVID
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Sri Lanka • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ireo firenena nosy dia tsy maintsy nanao fepetra henjana tamin'ny fifehezana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus, satria tototry ny areti-mifindra sy ny fahafatesana ny hopitaly, tranom-paty ary fandoroana faty any Sri Lanka.
Nanambara fanidiana hidina 10 andro vaovao i Sri Lanka.
Mirongatra ny tranga COVID-19 vaovao any Sri Lanka.
Manenika ny hopitaly sy tranom-paty ao Sri Lanka ny areti-mandringana.
Noterena hiankohoka amin'ny tsindry mafy avy amin'ireo manampahaizana ara-pitsaboana i Sri Lanka taorian'ny nandraisany ny isan'ny maty farany ambony indrindra COVID-19 tamin'ny 187 sy tranga 3,793 vaovao tamin'ny Alarobia ary nanambara ny hidin-trano 10 andro izay manomboka anio alina.
Sri Lanka dia nitatitra aretina 372,079 hatramin'ny nanombohan'ny valanaretina tamin'ny taon-dasa, ary 6,604 no maty. Nilaza ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana fa farafahakeliny indroa heny ny isan'ny maty.
“Firaketana manerana ny firenena Lockdown manan-kery manomboka amin'ny 10 alina anio (20 Aogositra) ka hatramin'ny Alatsinainy 30 Aogositra). Ny serivisy ilaina rehetra dia hiasa toy ny mahazatra, ” Minisitry ny fahasalamana Keheliya Rambukwella dia nilaza tao amin'ny Twitter.
Ny minisitry ny fahasalamana zandriny, Channa Jayasumana, dia niantso ny Delta niova karazana otrik'aretina "baomba mahery vaika nipoaka tany Colombo ary niparitaka tany amin'ny toerana hafa".
Ireo matihanina amin'ny fitsaboana, mpitarika ara-pivavahana, mpanao politika ary mpandraharaha dia niantso ny fanidiana ny firenena avy hatrany mba hamehezana ny fihanaky ny aretina.
Fampitandremana fa nahatratra ny fara heriny ny hopitaly sy ny tranom-paty, ny dokotera sy ny sendika dia nanery hatrany ny governemanta hametraka fanidiana.
Ny governemanta Sri Lankan dia nanemotra ny hetsika, nitanisa ny harinkarena narary.
Ny aretin'i Sri Lanka isan'andro dia nitombo avo roa heny tao anatin'ny iray volana ka hatramin'ny 3,897 XNUMX teo ho eo.
Hopitaly ao amin'ny firenena misy olona 21 tapitrisa dia tototry ny marary COVID-19 satria ny delta Delta azo afindra amin'ny alàlan'ny mponina.
Efa misy ny fameperana maro, miaraka am-pianarana, fanaovana fanatanjahan-tena sy dobo filomanosana ary voarara ny fampakaram-bady sy fampisehoana mozika. Nametraka ny ora tsy fahazoana mivoaka alina amin'ny alatsinainy koa ny tompon'andraikitra, mametra ny hetsika manomboka amin'ny 10 ora alina ka hatramin'ny 4 maraina isan'andro.
Ny onjan'ny aretina fahatelo any Sri Lanka dia voatsikera tamin'ny fankalazana ny taombaovao Sinhala sy ny taombaovao Tamil tamin'ny tapaky ny volana aprily.
Manaraka a fanidiana mandritra ny iray volana, nanokatra ny firenena ny governemanta tamin'ny volana Jona niantehitra tamin'ny famindrana vaksiny mahery setra ho paikadiny lehibe hiatrehana ny fiparitahana.
Tokony ho ny ampahefatry ny mponina ao Sri Lanka no vita vaksiny feno, ny ankamaroan'izy ireo dia voan'ny vaksinin'ny Sinopharm any Shina.
Nankatoavin'i Sri Lanka ihany koa ny tifitra Pfizer, Moderna, AstraZeneca ary Sputnik V an'i Russia.
Na eo aza ny dimy tapitrisa mahery amin'ireo mponina 21 tapitrisa nahazo vaksinina roa fatra, dia nahatratra olona mihoatra ny fahafahan'ny hopitalim-panjakana sy tsy miankina ny viriosy.